သိန်းဇော် - ဝီကီပီးဒီးယား
မန္တလေးသိန်းဇော် သို့မဟုတ် ကဗျာဆရာ Kဇော် သည် မြန်မာ့ဇာတ်သဘင်လောကတွင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သော ဇာတ်မင်းသား တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများကို သီဆိုသော အဆိုတော် တစ်ဦးလည်းဖြစ်သလို ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကလောင်အမည် Kဇော် ဖြင့်သာမက မောင်သိန်းဇော်အမည်ဖြင့်လည်း ကဗျာများရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၂ ကဗျာလောကသို့ ရောက်ရှိခြင်း
၃ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သော ကဗျာစာအုပ်များ
မောင်သိန်းဇော်ကို မကွေးတိုင်း၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ မြိုင်မြို့တွင် မိဘများဖြစ်ကြသော ဦးဗလနှင့်ဒေါ်မြကျင်တို့မှ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၂၁ ခု၊ ဝါဆိုလဆန်း ၆ ရက် (ခရစ်နှစ် ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ရက် ) နေ့တွင် မွေးဖွားသည်။
၁၉၈၆ ခုနှစ်က ရုပ်ရှင်အောင်လံမဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြခြင်းခံရသော "မွေးနေ့လက်ဆောင် ကဗျာ" သည် ပထမဆုံး ကဗျာဖြစ်သည်။ ဇာတ်မင်းသား မန္တလေးသိန်းဇော်အဖြစ် အောင်မြင်ကျော်ကြားနေချိန်ဖြစ်သော်လည်း ခေတ်ပေါ်ကဗျာများကို ရေးသားရွတ်ဆိုမှုကို ခုံမင်သည့်အတွက် ဇာတ်ပွဲကရင်း ကဗျာများကို ရွတ်ဆိုပြကာ ကဗျာဆရာဘဝကို ထုဆစ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
၁ ပြုံးနေတဲ့သံဆူးကြိုးကလေး ၁၉၈၈ (ပထမအကြိမ်)
၂၀၁၇ (ဒုတိယအကြိမ်) စာပေလောကစာအုပ်တိုက်
၂ နှင်းရည်စက်လက်+ရှုမျှော်ခင်း၂၁ ၂၀၀၁ စာပေလောကစာအုပ်တိုက်
၃ တောင်ကုန်းအဟောင်းများ ၂၀၁၃ (ပထမအကြိမ်)
၂၀၁၇ (ဒုတိယအကြိမ်) စိတ်ကူးချိုချိုစာအုပ်တိုက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် မောင်သာနိုး
၄ ဉာဏ်ပန်းအိုးလေး ၂၀၁၆ (ပထမအကြိမ်)
၂၀၁၇ (ဒုတိယအကြိမ်) နှစ်ကာလများစာပေ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် ကိုကိုသက်
၅ ညနေသည်ဖတ်ရှုရန်မျှသာ ၂၀၁၆ (ပထမအကြိမ်) စိတ်ကူးချိုချိုစာအုပ်တိုက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် ကိုကိုသက်
ကဗျာဆရာ Kဇော် (မောင်သိန်းဇော် )သည် ကမ္ဘာအေး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် မိသားစုနှင့်အတူ နေထိုင်လျက်ရှိသည်။
↑ Kဇော် (၂၀၁၆). ဉာဏ်ပန်းအိုးလေး. နှစ်ကာလများစာပေ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သိန်းဇော်&oldid=451792" မှ ရယူရန်
၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၁၂:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၁၂:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။